Ahoana ny famporisihana ny fahombiazan'ny SEO amin'ny rohy anatiny - Torohevitra avy amin'ny Semalt
Tranonkala an'arivony no misy, ary misy maro hafa nohariana isan'andro. CompetitionFa ny fisian'ny aterineto dia mafy. Raha te hifanaraka amin'ny mpifaninana aminao ianao, dia mila manatsara ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny SEO eo an-toerana. Iray amin'nyNy singa tena manan-danja ao amin'ny tranokalan'ny SEO dia rohy anaty - cheap vps uk windows. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mihaino azy io. Ny rohy anatiny dia misy fiantraikany amin'ny fikarohanaIreo fitaovana hita sy mijery ny votoatiny sy ny traikefan'ny mpampiasa
Artem Abgarian, Tale Mpitarika Success Success an'ny Semalt ,dia nanatontosa ny tetikady rohy anatiny mba handrava ny mpifaninana aminao.
Ny fomba hitadiavana ny rohy anatiny ao anaty lahatsoratra
Ny fitaovana mahomby azonao ampiasaina mba hanangonana tahirin-tsarimihetsika dia ny "Screaming Frog". izanydia manana dikan-teny maimaim-poana sy karama. Ny dikan-teny malalaka dia natao ho an'ny tranokala kely kokoa.
Mipetraha ny tranokala
Ny rohy anatiny anatiny
Rehefa vita ny fitsapana dia ilaintsika ny mikaroka ny URL nokarohintsika. To makedingana haingana, midira amin'ny faran'ny URL ao anaty boaty fikarohana. Rehefa hitanao izany dia tsindrio ny URL havanana ary manisika mankany HTML. Farany, tsindrio ny"amin'ny rohy" any amin'ny faran'ny pejy. Hahita ny rohy anatiny ao amin'ny URL izay nofidinao.
Ny dingana manaraka dia ny manondrana rohy anaty. Raha te hanondrana azy ireo dia tsindrio ny soso-kevitra havananaao amin'ny URL ary misafidiana "Exports> Links".
Diovy ny lisitry ny rohy anaty
Aorian'ny fanarahana ny rohy anatiny, ny dingana manaraka dia ny manadio ny lisitra. Izany diaAzo atao ny manana URL duplicate noho ny pejy momba ny hetraketraky ny rafitra sy ny fanaraha-maso..Apetraho ao amin'ny Google Doc ny URL ary alamina amin'ny alàlan'ny alalana izany.Ireo URL duplicate dia ho vondrona ary noho izany, mora ny manala.
Ny dingana manaraka dia ny hitady karatra manokana hanesorana ny URL. Raha mampiasa ianaoMac mampiasa baiko + F. Raha ampiasaina amin'ny Windows ny fifehezana + F mba hanesorana azy ireo, dia havao ny lisitry ny rohy anatiny sy ny endri-tsoratra hafa.
Halalino ny fanamafisana ny toerana
Amin'ny lisitry ny rohy anatiny dia mila manapa-kevitra ny anton-javatra eo amin'ny toerana misy anao ianaote-handinika ianao. Ireto ny fepetra ampiasaina.
Ny teny fototra ampiasaina ao amin'ny URL, endriky ny lahatsoratra sy ny lohateny.
Ny halavan'ny lahatsoratra.
Diniho raha eo amin'ny pejy voalohany ilay rohy.
Raha hita ao amin'ireo teny 100 voalohany ao amin'ilay lahatsoratra ilay rohy.
Ny daty namoahana ilay lahatsoratra ary raha navaozina izany.
Ampiasao ny Google Sheet mba hamerina hijery ny rohy rehetra ary hanoratra ny valiny.
Ny fomba fampiasana azy dia miankina amin'ny hoe vaovao na vaovao ny tranonkalanao.
Ho an'ny vohikala vaovao dia fidio ny pejy lasibatra ary hazavao izany amin'ny alàlan'ny fizarana voaresakaambony. Ho hitanao ny rohy rehetra sy ny fomba hanatsarana azy ireo.
Manaraka ny fanaraha-maso rohy aoriana mba hahatakatra ny habetsaky ny asa ilaina ho an'ny pejy fototra.Ampiasao ny pejin-dehibe mba hamoronana hevitra ifantohana. Ilainao ny kaonty SEMrush mandray karama ho an'ny mpamorona. Avy amin'ny fampahalalana azonaoManangana lisitry ny teny fanalahidy mifototra amin'ny votoatin'ny mpifaninana aminao.
Ny tranonkala misy
Tsy mitovy ny dingana raha manana tranonkala misy votoaty. Avy amin'nyNy teny fanalahidy dia mamaritra ny votoatin-kafatrao. Avy eo, ampiasao i SEMrush hanondrana ny fifandraisana rehetra ary hijery raha misy pejy izay efa mipetraka ho anaoKeyword. Hamafiso ny pejy ary ampiasao izany.
Zava-dehibe ny mifehy ny rohy anatiny. Ny rohy dia ampiasainamilina fikarohana mba hitenenana ireo pejy izay heverinao fa manan-danja ary koa hanampy ny mpitsidika hivezivezy amin'ny tranokala.